Isaya 56 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Makomborero pavatorwa nengomwa (1-8)
Imba yekunyengeterera yemarudzi ese (7)
Varindi mapofu, imbwa dzisingatauri (9-12)
56 Zvanzi naJehovha: “Tsigirai kururama,+ uye itai zvakarurama,Nekuti ruponeso rwangu ruchakurumidza kusvikaUye kururama kwangu kucharatidzwa.+ 2 Anofara munhu anoita izviUye mwanakomana wemunhu uyo anozvibatisisa,Anochengeta Sabata uye asingarisvibisi,+Uye anodzora ruoko rwake kuti arege kuita chero chinhu chakaipa. 3 Munhu wekune imwe nyika anouya kuna Jehovha+ ngaarege kuti,‘Chokwadi Jehovha achandiparadzanisa nevanhu vake.’ Uye ngomwa ngairege kuti, ‘Onai! Ndiri muti wakaoma.’” 4 Nekuti Jehovha ari kuti kungomwa dzinochengeta masabata angu uye dzinosarudza zvandinofarira uye dzinobatisisa sungano yangu: 5 “Ndichaita kuti dzive nechiyeuchidzo nezita mumba mangu uye mukati memasvingo angu,Izvo zvinopfuura vanakomana nevanasikana. Ndichadzipa zita rinogara nekusingaperi,Iro risingazoparari. 6 Kana vari vekune imwe nyika vanouya kuna Jehovha kuti vamushumire,Kuti vade zita raJehovha,+Uye kuti vave vashumiri vake,Vese vaya vanochengeta Sabata uye vasingarisvibisiUye vanobatisisa sungano yangu, 7 Ndichavaunzawo kugomo rangu dzvene,+Ndoita kuti vafare chaizvo muimba yangu yekunyengeterera. Mipiro yavo inopiswa nezvibayiro zvavo zvichagamuchirwa paatari yangu. Nekuti imba yangu ichanzi imba yekunyengeterera yemarudzi ese.”+ 8 Changamire Ishe Jehovha, uyo ari kuunganidza vaIsraeri vakapararira,+ anoti: “Ndichaunganidza vamwe vanhu kwaari vasiri vaya vakatounganidzwa kare.”+ 9 Imi mhuka dzese dzesango, uyai kuzodya,Imi mhuka dzese dzesango dziri mudondo.+ 10 Varindi vake mapofu,+ hapana kana mumwe chete wavo acherechedza.+ Vese zvavo imbwa dzisingatauri, dzisingakwanisi kuhukura.+ Dziri kufemereka uye dzakarara pasi; dzinoda zvekurara. 11 Ivo imbwa dzinokara kwazvo;Hadzitomboguti. Ivo vafudzi vasinganzwisisi.+ Vese zvavo vaenda nenzira dzavo;Mumwe nemumwe wavo anotsvaga kuzvipfumisa achibiridzira uye anoti: 12 “Uyai, regai nditore waini,Uye ngatishapirei doro.+ Mangwana achaita sanhasi, richava zuva rakatonaka kupfuura nhasi!”